Khataraha Wadooyinka Magaalooyinka Puntland – Bosaso Times News
Khataraha Wadooyinka Magaalooyinka Puntland
admin August 1, 2017 Khataraha Wadooyinka Magaalooyinka Puntland2017-08-01T21:32:46+00:00 Articles, Puntland, somali News No Comment
Waxaan ka mid ahay dadka baabuurta ku wata magaalooyinka Puntland sida Boosaaso, Garoowe iyo magaalooyinka kaleba. Waxaan maalin walba la kulmaa khataro kala gedisan oo wadayaasha baabuurta ku kacayaan habeen iyo maalin kuwaas oo aysan jirin cid u xilsaaran xalintooda sida taraafiko, booliis iyo hay’ad kale midna.
Khataraha waxaa ka mid ah:
Wadayaasha baabuurta oo aan u aabayeelin seedka waddada una socda sidey doonaan
Baabuurta BLka oo wadooyinka dhexdooda dadka ku dejiya kana qaada oo aan marna tixgelin nolosha iyo badbaadada rakaabka saaran iyo kuwa ay qaadayaan midna
Baabuurta BLka oo meeshay doonaan istaaga markay doonaana dhaqaaqa oo aan u aabayeelin wadayaasha kale iyo isticmaalayaasha kale ee wadada sida dadka, duunyada, gaadiidka kale iwm.
Wadayaasha baabuurta oo jidka iska soo gala iyaga oo aan eegeyn midig iyo bidix toona. Wadayaasha oo iska dhaqaaqa iyaga oo aan eegin jidka iyo wadayaasha kale ee wadada maraya
Baabuurta oo jid weynaha oo mashquul ah gadaal gadaal usoo gala halkii la rabay inuu jid cadaha kusoo kala wareego sida saxda ah
Baabuurta xamuulka iyo wadayaashooda oo wadada meeshay doonaan dhigta, marar badanna xira jidka oo dhan sababana jidgooyo iyo wadadii oo isku xiranta iwm
Baabuur lagu sheego inay qaad wadaan oo isku dara xawaare sare iyo hoon una aabe yeelin wadada iyo marayaasha kale
Rag hubaysan oo baabuur saaran, qaarkood waardiye u yihiin nin mas’uul sheeganaya oo wadada xoog ku mara watana baabuur muraayado qafilan leh, xabadaha wadada ku furta dadka shacabkaa iyo baabuur leyda khatar geliya meel looga dacwadoodana aysan jirin.
Dadweynaha oo aan xaquuqdooda aqoon iyo hadii gaari gaari ku dhaco hadba kii muran badan ama taageerayaal badan ayaa guulaysta, dadweynuhuna waa u sabciyaan hadba kii muranka ku guulaysta ama handadaad badan mana jirto taraafiko durbadiiba aad heli karto..
Khataraha wadooyinka magaalooyinka ka jira waa fara badan yihiin inta kor ku xusan waa in yar oo aan ka xasuustay. Waxaadna arkaysaa baabuur badan oo shilal ku galaya wadooyinka waxyeelo naf iyo maalna geysanaya.
Jid gooyada baabuur dhigashada (Unlawful Parking)
Qof walba waxaa laga rabaa inuu u dhaqmo sida uu asagu jeclaan lahaa in loola dhaqmo. Arinkan waa muhiim oo diinteena suuban ayaa noo jidaysay, in qofka muslimkaa marwalba uu tixgeliyo qofka kale ee muslimka iyo bini’aadamka guud ahaan kana ilaaliyo dhibta iyo wixii dhibaya.
Hadaba waxaa jira in baabuur leyda Soomaalida ay dhib ku tahay inay baabuurta u dhigtaan si waafaqsan sharciga kana fogaadaan falalka keena in dhib loo geysto baabuur leyda kale ee iyaguna baabuurta dhigta goobaha markaa ku haboon.
Waxaad arkaysaa baabuur aad meel dhigatay oo aadan la bixi karin ama kaxaysan karin markaad u baahato waayo baabuur kale ayaa dhinac kasta laga dhigay baabuur kaagii meel aad ka baxdana ma leh. Waxaad arkaysaa wadadii aad ka bixi lahayd oo baabuur lagu gufeeyey, gadaal hadaad damacdo inaad u baxdo midbaa baabuur kale dhigtay, midig iyo bidix iyagana waa xiran yihiin iwm.
Waxaa kaloo intaa sii dheer boosas badan oo dadku baaburta dhigan lahaayeen oo aan la dhigan karin waayo jidki laga geli lahaa ninbaa baabuur dhigtay. Maxaa sababaya qofkaan muslimka ah inuusan garan in jid gooyada iyo dhibida dadka ay tahay denbi Alle laga galay iyo mid bini’aadamka kale laga galayo.
Waxaa kaloo yaab ah in meherad layaasha aysan kala jeclayn midka hortiisa ah ee la xirayo aadna moodayso in dadka Soomaaliyeed ay gaareen heer ay caado la noqotay xumaaanta iyo arxan darada.
Waxqabad la’aanta Dawladda
Waxaa dhib ah in dawlad kusheeg jiro, waxna aysan ka qaban dhibaatooyinka baabuur leyda iyo wadooyinka ka jira. Waa dawlad aad moodo inay ku faraxsan tahay inay daawato shacabka dhibtiisa iyo waxyeelada soo gaarta. Maxaa hortaagan in la helo taraafiko, ganaax iyo in laga shaqeeyo nidaamka wadooyinka iyo hab dhigashada baabuurta (lawful parking).
Soomaaliya dawlad bay ahayd xoogleh, sharciyo leh, waxaana sharciyada ka midahaa sida wanaagsan u jira kuwa wadooyinka ama taraafikada, maxaa u diiday dawladda Puntland inay hirgeliso shuruucda wadooyinka si loo badbaadiyo hantida iyo nafta shacabka loogana hortago khatarta wadooyinka magaalooyinka dhexdooda ku soo badanaya.
Waxaa layaab ah in ciidanka iyo madaxda dalka ay qayb ka yihiin foodada wadooyinka, ayna mararka qaarkood khataraha ugu badan xaggooda ka yimaadaan, maadaama ay wataan hub wadadana ay xabado ku furaan si ay u maraan. Maxaa laga filayaa shacabka hadii kii sharciga laga sugayey inuu ilaaliyo uu jebinayo horseedna ka yahay foodada wadooyinka ka jirta.
Magaalooyinku waa is dhaamaan, meesha aadka u liidata waa magaalada Boosaaso oo aad moodo in ay tahay goob kufiican qaadashada canshuurta iyo dakhliga ka soo baxa balse aan waxba laga qaban dhibaha ka jira wadooyinkeeda, ayna ka midyihiin jidka faras magaalaha oo jajaban, boholo u badan ayna dhacdo baabuurtu inay isugu yimaadaan hal seed iyaga oo ka cararaya boholaha waaweyn ee jidka ku dhex samaysmay sidaasna ay khatar ku geliyaan dadka iyo baabuurleyda kaleba.
Sidoo kale falalka ugu badan ee askartu geysato dhinaca wadooyinka waxay ka dhacaan magaalada Boosaaso. Qiyaastii tiro dad ah ayaa ciidan ku sheeg wadada furanaya ay ku dilaan magaalada Boosaaso sanadkasta ama siyaabo kale khasaare u soo gaara.
Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah in wadooyinka qaarkood askar madax ku sheeg waardiyeynaya ay xirtaan habeenkii iyaga oo aan dhigin wax calaamad ah halkaasna ay dhacdo inay rasaas ku furan wadayaasha baabuurta ayna geystaan dil iyo dhaawacyo fara badan. Maxaa diiday inay wadada dhigtaan calaamad meel fog laga arki karo si loo badbaadiyo dadka shacabka ah ee waxba galabsan ee maalin walba sida xun loo laynayo.
http://www.bosasotimes.com/khataraha-wadooyinka-magaalooyinka-puntland/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/08/bosasoroad.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/08/bosasoroad-150x150.jpg 2017-08-01T21:32:46+00:00 adminArticlesPuntlandsomali NewsBoosaaso,Puntland,WadoWaxaan ka mid ahay dadka baabuurta ku wata magaalooyinka Puntland sida Boosaaso, Garoowe iyo magaalooyinka kaleba. Waxaan maalin walba la kulmaa khataro kala gedisan oo wadayaasha baabuurta ku kacayaan habeen iyo maalin kuwaas oo aysan jirin cid u xilsaaran xalintooda sida taraafiko, booliis iyo hay'ad kale midna. Khataraha waxaa ka...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Boosaaso, Puntland, Wado
« Madaxweyne Farmaajo soo dhawow
Dawladda Soomaaliya oo kala noqotay kontaraadihi shirkado badan. »